3 Easy Ụzọ ndabere Android Ndi ana-akpo na ala
Chọrọ ndabere gị mkpa Android kọntaktị na PC gị na ọ bụrụ na ọdachi na ị hapụ ha? Dị nwetara ọhụrụ ama na chọrọ mbubata kọntaktị kwadoo? Ebe a na-atọ mfe oge na-azọpụta aghụghọ n'ihi na ndị mmadụ na-amasị ndabere Android kọntaktị.
Usoro 1: Android Ndi ana-akpo ndabere na MobileGo for Android Method 2: ndabere Android Ndi ana-akpo ka Gmail Method 3: ndabere kọntaktị site na Android na eriri USB Comparison n'etiti 3 Ụzọ Karịsịa
Usoro 1: Android Ndi ana-akpo ndabere na MobileGo for Android
Ndabere niile ma ọ bụ họrọ kọntaktsị na ebe nchekwa ekwentị, Gmail, Twitter, Facebook, wdg
Ndabere Android kọntaktị na PC, Outlook, Windows Akwụkwọ Adreèsị & Windows Live Mail.
Jikota oyiri kọntaktị na mkpa gị Android ekwentị Address Book.
Ndabere ọzọ faịlụ, gụnyere, SMS, kalenda, ngwa, ngwa data, oku na ndekọ na media.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na HTC, Samsung, Google, LG, Sony, Motorola, Huawei, Acer, Asus, Dell, ọzọ ebe a >>
Olee otú ndabere Kọntaktị na Android na MobileGo for Android
Tupu inye nkwado Android kọntaktị
1. Inwe njikere: Your Android ekwentị, a eriri USB (nhọrọ), a PC ma ọ bụ Mac, Wondershare MobileGo for Android 2. Ndabere kọntaktsị na akaụntụ: ndabere kọntaktị na ihe ọ bụla na akaụntụ gị na-akwado Android ekwentị. Abanye n'ime ihe ndekọ na gị Android ekwentị. Mgbe ahụ, na kọntaktị edemede a ga-emere na window. (Nani Windows version)
Rịba ama: The esonụ ndu na-eji Windows version screenshots. Ụzọ mezuo gị ọrụ na gị Mac bụ fọrọ nke nta ahụ.
Otú ọ dị, Mac version adịghị ekwe ka nkwado ndabere na mpaghara kọntaktị site na ndekọ na kọmputa, Outlook na ndị ọzọ. E wezụga na, na Mac version adịghị ka ị ndabere media na ngwa data
Nzọụkwụ 1. Mee Up Your akporo ekwentị
Ka malitere, download na wụnye a Android kọntaktị manager - Wondershare MobileGo for Android na PC gị. Mgbe ọ gụchara echichi, ị kwesịrị na-agba ọsọ ya. Jikọọ gị android ekwentị gị PC site eriri USB ma ọ bụ site Wi-Fi. Nke a na usoro ga-akpaghị aka ịchọpụta ngwaọrụ gị na-egosi na ya na isi window. Wee pịa "Ndi ana-akpo" taabụ na ekpe ebi ndụ ịbanye kọntaktị management window.
Cheta na: Iji WiFi dị ka ndị mbụ na-agbalị? Ị mkpa ibudata na wụnye MobileGo ngwa faịlụ.
Nzọụkwụ 2. selectively Back Up Android Ndi ana-akpo
Kọntaktị management window bụ dị ka n'okpuru. Họrọ gị chọrọ kọntaktị wee pịa Import / Export bọtịnụ. Nke a ga-eme ka elu a ndọpụta ndepụta. họrọ Export kọntaktị ahọrọ na kọmputa ma ọ bụ mbupụ kọntaktị niile na kọmputa. Mgbe ahụ, a esiri-ala ndepụta na-egosi na nri, ị nwere ike ndabere kọntaktị na Outlook Express, Outlook 2003/2007/2010/2013, vCard faịlụ, Windows Address Book, na Windows Live Mail.
Nzọụkwụ 3. One Pịa ndabere Ndi ana-akpo na ihe Computer
Ke isi window, pịa One-Click ndabere. Nkwado ndabere na mpaghara dialog abịa si, nke na-ahapụ gị ndabere kọntaktị niile, kalenda, ederede ozi, oku na ndekọ, ngwa, music, listi ọkpụkpọ Ama, video na photos. Nkwado ndabere na mpaghara kọntaktsị na Android, ị dị nnọọ mkpa uncheck ndị ọzọ faịlụ wee pịa Back Up.
Usoro 2: Ndabere Android Ndi ana-akpo ka Gmail
Ọ bụrụ na gị Android ekwentị-enye gị ohere ndabere Android kọntaktị na Google site syncing, ị nwere ike na-agbalị otú a.
Nzọụkwụ 1. Turn na gị Android ekwentị na mgbata Setting. Pịgharịa gaa na ala na ihuenyo ịchọta Akaụntụ na mmekọrịta.
Nzọụkwụ 2. abanye n'ime gị Google akaụntụ na enweta mmekọrịta Ndi ana-akpo. Chere ruo mgbe mmekọrịta usoro zuru ezu.
Nzọụkwụ 3. Ọ bụrụ na ị zọpụta niile kọntaktị gị gị Google akaụntụ, i nwere ike ikwu mbụ na nke abụọ nzọụkwụ, na ozugbo abanye na gị Google akaụntụ na n'ala Gmail peeji na PC.
Nzọụkwụ 4. Họrọ kọntaktị ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara pịa More> Export. Họrọ vCard Ọkpụkpọ na ichekwa kọntaktsị gị PC. Ị nwere ike imeghe ma na-ele ha na Address Book.
Method 3: ndabere kọntaktị site na Android na eriri USB
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ndi ana-akpo ngwa gị Android ekwentị. Enweta menu na-egosi menu ndepụta ma họrọ Import / Export.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Export ka USB nchekwa ma ọ bụ ụfọdụ akara ngosi na-amasị
Nzọụkwụ 3. Nke a ụzọ ka ị na-ndabere Android kọntaktị na SD kaadị. The kọntaktị na-echekwa na a vCard faịlụ. Ikwunye na eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na PC.
Nzọụkwụ 4. Mgbe gị Android ekwentị ndokwasa dị ka a flash mbanye, na-emeghe ya na ikpuru na dobe vCard faịlụ ka PC.
Comparison n'etiti 3 Ụzọ Karịsịa
Bugharịa ọdịnaya site Nokia ka Android
Jikwaa All Foto ndị dị na akporo ekwentị
Get iTunes maka Android ka ịnyefe ọdịnaya
Nyefee na Ndi ana-akpo ka Android Ngwaọrụ
Ihe Niile banyere Android Ngwaọrụ Manager
> Resource> Android> 3 Easy Ụzọ ndabere Android Ndi ana-akpo na ala